Mon, Jun 1, 2020 at 7:40pm
काठमाडौँ, २२ साउन अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले अनुमति दिए नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आगामी असोजमा टि–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने भएको छ । ओमान क्रिकेटको आयोजनामा ६ राष्ट्र आबद्ध टि–ट्वान्टी क्रिकेट असोज तेस्रो साता सुरु हुँदैछ । आईसीसीले अनुमति दिए नेपालले आयोजक ओमानसहित नेदरल्यान्ड, आयरल्यान्ड, हङकङ र नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । सहभागिता जनाउन ओमानले पत्राचार गरेपनि नेपालले आईसीसीको निर्णयपछि मात्र सहभागिता निश्चित गर्नेछ..
काठमाडौँ, २२ साउन आईसीसी टी-२० वरियताको ब्याटिङमा पारस खड्का २७ स्थान सुधार गर्दै ९३ औँ स्थानबाट ६६ औँ स्थानमा पुगेका छन् । ब्याटिङ वरियतामा पारसले भारतीय खेलाडी महेन्द्रसिंह धोनी, वेस्ट इन्डिजका ग्रिस गेललाई समेत पछि पारेका छन् । टी-२० अलराउण्डरमा पारस २५ औँ स्थानमा छन् । यसअघि ३९ औँ स्थानमा रहेका उनले १४ स्थान सुधार गरेका हुन् । अलराउण्डरतर्फ दक्षिण अफ्रिकाका क्रिस मोरिस, भारतका..
काठमाडौं, २२ साउन । जिम्बाब्वे क्रिकेटलाई निलम्बन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले विश्वकप छनोटमा जिम्बाब्वेको ठाउँमा टी–२० विश्वकप छनोट खेल्ने अवसर नाइजेरियाले पाउने भएको छ । आईसीसीको निर्णयसँगै विश्वकप छनोटमा केन्या र नामिबियासँगै नाइजेरिया हुने भएको छ । आगामी अक्टोबरमा यूएईमा हुने छनोटमा १४ देशले भाग लिनेछन् र शीर्ष ६ विश्वकपमा पुग्नेछन् । नाइजेरिया अफ्रिका छनोटमा तेस्रो भएको थियो ।..
काठमाडौँ, २१ साउन कतारमा सन् २०२२ मा आयोजना हुने आसन्न फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत एशिया दोस्रो चरण छनोटका लागि नेपालले आज प्रारम्भिक चरणमा ३१ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ । नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले प्रशिक्षणमा बोलाइएका ३६ खेलाडीमध्येबाट प्रारम्भिक चरणमा ३१ खेलाडीको घोषणा गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले जनाएको छ । विश्वकप छनोटमा नेपाल समूह बी मा रहेको छ ।..
एजेन्सी। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले प्रदान गर्दै आएको 'फिफा द बेस्ट अवार्ड' घाेषणा हुन लगभग १ महिना बाँकी छ । अवार्ड घाेषणा हुन केहि समय बाँकी भए पनि यस वर्षकाे 'फिफा द बेस्ट अवार्ड' कसले जित्ला भन्ने चर्चा हुन शुरू भइसकेकाे छ । यसपटक 'फिफा द बेस्ट अवार्ड' को लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । मनोनयनमा च्याम्पियन्स लिग विजेता लिभरपुलको खेलाडीको दबदबा रहँदा साविक..
काठमाडौँ, २१ साउन म्यानचेस्टर युनाइटेडले इंग्ल्याण्डका सेन्टर ब्याक ह्यारी मग्वाएरलाई लिसेस्टर सिटीबाट ८० मिलियन पाउण्डमा भित्र्याएको छ । जसले लिभरपुलका भर्जिल भ्यान डाइकलाई उछिन्दै मग्वाएर विश्वका सर्वाधिक महँगा डिफेन्डर बनेका छन् ।भ्यान डाइक २०१८ को जनावरीमा साउथह्याम्पटनबाट लिभरपुल जाँदा ७५ मिलियन पाउण्डमा सबैभन्दा महँगा डिफेन्डर बनेका थिए । अहिले २६ वर्षका मग्वाएरले युनाइटेडसँग ६ वर्षका लागि सम्झौता गरेका छन् । समग्रमा प्रिमियर लिग..
काठमाडौँ, २० साउन नेइमारलाई ब्रजिलले राष्ट्रिय फुटबल टिमको कप्तानबाट हटाएको छ । आगामी महिना हुने कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा अब डिफेन्डर ड्यानी अल्भेसले ब्रजिलको कप्तानी गर्नेछन् । २७ वर्षीय फरवार्ड नेइमारलाई ८ महिनाअघि कप्तानको जिम्मेवारी दियएको थियो। तर अनुसासनका कारण उनलाई कप्तानबाट हटाइएको प्रशिक्षक टिटेले बताएका छन्। ३६ वर्षीय अल्भेसले कोपा अमेरिकाअघि कतार र होन्डुरसविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि ब्रजिलको कप्तानीमा गर्नेछन् । आगामी १४..
ग्लोबल टी–२० लिग : सन्दीप आवद्ध टोरन्टोको दोस्रो जित
काठमाडाैं, २० साउन । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टाेलिका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित टोरन्टो नेशनल्सले मोन्टरियल टाइगर्सलाई ४ विकेटले पराजित गर्दै ग्लोबल टी–२० लिगमा दोस्रो जित निकालेको छ। ग्लोबल टी–२० को टिम टोरन्टो नेसन्समा आवद्ध नेपाली स्पिनर सन्दीपले मोन्टेरियल टाइगर्सविरुद्धको खेलमा यसअघिको खेलमा भन्दा सुधारीएको प्रदर्शन गरेका हुन् । उनले मोन्टेरियलविरुद्ध ४ ओभर पुरा बलिङ गर्दै २८ रन खर्चिएर १ विकेट हात पारे । सन्दीपले ‘सुधारिएको’ प्रदर्शन..
यू-१९ क्रिकेट टिमले श्रीलंकामा तयारी गर्ने
काठमाडौँ, १९ साउन एसीसी यू-१९ एसिया कपका लागि नेपाली यू-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले श्रीलंकामा तयारी गर्ने भएको छ । श्रीलंकामा आयोजना हुने एसिया कपका लागि नेपालले पहिलो चरणको तयारी टियु क्रिकेट मैदानमा गर्नेछ । तर, नेपालले अन्तिम चरणको तयारी भने श्रीलंकामा गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । एसियन क्रिकेट काउन्सिल (एसीसी) को नेपाल प्रतिनिधि भावना घिमिरेले नेपाली टोलीको अन्तिम तयारी श्रीलंकामा गर्ने तयारी..
काठमाडौँ, १९ साउन । क्यानडामा जारी ग्लोबल टि–ट्वान्टी क्रिकेट लिगमा यतिबेला नेपाली क्रिकेट टिमका सदस्य सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछाने खेलिरहेका छन् । सोमपाल पहिलोपटक विदेशी लिग खेलेका हुन् भने सन्दीपले गत संस्करण पनि यो लिग खेलेका थिए । जारी लिगमा दुबै खेलाडीले खराब प्रदर्शन गरेका छन् । डेब्यू खेलमा राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा गरेका सोमपालका लागि बिर्सनलायक रह्यो । सन्दीपले भलै १ विकेट..
आईसीसी टी–२० बरियता : नेपाल ११ औं स्थानमा यथावत
काठमाडौँ, १८ साउन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले शनिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ बरियतामा नेपाल यथा स्थानमा रहँदै ११ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालले हालै मलेसियासँग खेलेको दुईवटा टी–२० सिरिजमा क्लिन स्विप र सिंगापुरमा सम्पन्न आईसीसी टी–२० विश्वकप छनोट अन्तर्गतक एसियाली छनोट खेलेपनि वरियतामा सुधार गर्न सकेन । नयाँ वरियताअनुसार नेपालले १४ खेलबाट दुई सय एक अक पाएको छ । एसोसिएट देशमा भने..
मेस्सीलाई ५० हजार डलर जरिवाना, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा तीन महिना प्रतिबन्ध
काठमाडौँ, १८ साउन । अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीलाई तीन महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा प्रतिबन्ध लागेको हो । कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिना पराजित भएपछि उनले प्रतियोगिता नै ‘भ्रष्ट’ भन्दै टिप्पणी गरेका कारण प्रतिबन्ध लगाइएको हो । दक्षिण अमेरिकी फुटबल संघले उनी माथि ५० हजार डलर जरिवाना पनि लगाएको छ । प्रतिबन्धका कारण मेस्सीले सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा चिली, मेक्सिको..
अस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्मिथले शतक हान्दा विराट कोहली र सचिनलाई उछिने
काठमाडौँ, १७ साउन । इङ्ल्यान्डसँग जारी टेस्ट म्याचबाट पुन: खेलमा फर्किएका अस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टिभ स्मिथले १ सय २२ रन बनाउँदा ८ विकेट गुमाइसकेको अस्ट्रेलियाको पारी २ सय ८४ पुग्न सक्यो । बल टेम्परिङमा परेर १२ महिना प्रतिबन्ध भोगेका अस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टिभ स्मिथले शतक सहितको 'कम ब्याक' गर्दा विराट कोहली र सचिन तेन्दुलकरले टेस्टमा सबैभन्दा थोरै इनिङमा बनाएको सेन्चुरी संख्यालाई पछि पारेका छन्..
एजेन्सी, १७ साउन । जब सबै समयको उत्कृष्ट खेलाडीको नाम आउँछ तब बिनाविवाद दुई खेलाडीको नाम आउँछ एक ब्राजिलियन पेले अनि दोस्रो अर्जेन्टिनाका डिएगो म्याराडोना । दुबै खेलाडीमा उस्तै गुण पाइन्छन् । दुई खेलाडीबीच तुलना गर्ने हो भने समानता पाउन सकिन्छ । दुबैले फिफा प्लेयर अफ द सेन्चुरीको अवार्ड पाएका छन् । अनेक सामाजिक तनावका बाबजुत पनि म्याराडोना बिलियन मानिसहरुका लागि आशाको..
फिफा अवार्डका ३ प्रमुख दावेदार : राेनाल्डाे, मेस्सी र भान डिजेक!
काठमाडौँ, १६ साउन फिफा अवार्डका लागि फिफाले मनोनयनमा परेका १० जना खेलाडीको नाम सार्वजानिक गरिसकेको छ । क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बाप्पे, इडेन हजार्ड, लियोनल मेस्सी, भिर्गिल भान डाइग, सेडीओ माने, फ्रेन्की डि जोङ, एलिस्सन बेकर, रहिम स्टारलिङ र बर्नान्डो सिल्भा पनि यसपटक मनोनयनमा स्थान पक्का गरेका छन् । यी १० जनामध्ये यो अवार्डका लागि यी तीन खेलाडी प्रमुख दावेदार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका..
भारतीय प्रशिक्षक बन्न दुई हजार बढीको आबेदन
एजेन्सी, १६ साउन भारतीय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकको लागि करिब दुई हजार भन्दा बढीको आवेदन परेको छ । भारतले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लागि आबेदन खुल्ला गरे लगत्तै २ हजार भन्दा बढीले मुख्य प्रशिक्षक पदका लागि आवेदन दिएका छन् । भारतीय प्रशिक्षक बन्न विश्वभरका प्रशिक्षक तथा पुर्व खेलाडीको घँइचाे लागेको बताईएको छ । आवेदन दिनेमा अस्ट्रेलियाका पुर्व खेलाडी टम मोड्डी तथा न्युजिल्याण्ड र किंग्स..
ग्लोबल टी–२० मा आज सोमपालले डेब्यु गर्ने सम्भावना !
काठमाडौँ, १६ साउन ग्लोबल टी२० लिगमा आज सोमपाल कामीको टिम विन्निपेग हक्सले ब्राम्प्टन वुल्भ्सको सामना गर्दैछ । विन्निपेग ३ खेलमा २ जित निकाल्दै ४ अंकका साथ लिगको तेस्रोस्थानमा छ । यस्तै, २ खेल खेलेर दुवै खेलमा जित हासिल गरेको ब्राम्प्टन ४ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा छ । चौथो खेलमा ब्राम्प्टनविरुद्ध सोमपालले खेल्ने प्रबल सम्भावना छ । विन्निपेगको टिममा ४ जना अलराउन्डर छन् ।..
काठमाडौँ, साउन १६ । नेपालले विश्वकप पुग्न अझै एक अवसर पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने आइसीसीको निर्णयमा भर पर्नेछ । आइसीसीले गर्ने निर्णयले नेपालले अझै एकपटक अवसर पाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । गत आइतबार भएको आइसीसी विश्वकप छनोटको एसिया फाइनलको अन्तिम खेलमा सिंगापुरसँग पराजित भएपछि नेपाल विश्वकपको ग्लोबल छनोट खेल्नबाट बञ्चित भएको छ । यससँगै नेपाली खेलाडी र फ्यानहरु निराश भएका छन्..
फिफा बर्ष खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक, नेइमार आउट, को-को परे अरु ? (सूचीसहित)
काठमाडौँ, १५ साउन बुधबार विश्व फुटबल महासंघले फिफा बर्ष पुरुष खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ । फिफाले बुधबार सार्वजनिक गरेको शीर्ष १० खेलाडीको सूचीमा पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सी अटाए पनि ब्राजिलियन स्थान नेइमार अटाउन सकेनन् । फिफाले पुरुष खेलाडीको मनोनयनमा रोनाल्डो र मेस्सीसंँगै डी जोङ फ्रेनकी, म्याथिज डी लिट, इडेन हजार्ड, ह्यारी केन, साडियो माने, केलियन एम्बाप्पे, मोहमद..
घाँटी दुखेर औषधि खाँदा ८ महिना निलम्बन
एजेन्सी, १५ साउन घाँटी दुखेपछि खोकीको औषधिमा प्रतिबन्धित पदार्थ रहेको पत्ता लागेपछि भारतीय युवा ओपनर तथा पूर्व यू१९ कप्तान पृथ्वी श निलम्बित भएका छन् । भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारि गर्दै शले प्रतिबन्धित पदार्थ प्रयोग गरेका कारण ८ महिनाको लागि निलम्बित गरेको जनाएको छ । श आगामी नोभेम्बर १५ सम्म निलम्बित भएका हुन् । १६ जुलाईमा..
आईसीसीले प्रतिबन्ध लगाएपछि जिम्बाब्वेका खेलाडीहरु सित्तैमा खेल्न तयार !
काठमाडौँ, १५ साउन आफ्नो देशको क्रिकेट जोगाउनका लागि जिम्बाब्वेका खेलाडीहरुले सित्तैमा खेल्न तयार रहेको बताएका छन् ।आईसीसीले हालै जिम्बाब्वे क्रिकेटलाई निलम्बन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आईसीसीको आउँदो टी-२० क्वालिफायरका लागि सित्तैमा खेल्न खेलाडीहरु तयार रहेको खबर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । महिलाको टी-२० क्वालिफायर अगस्ट र पुरुषको क्वालिफायर अक्टोबरमा हुँदैछ । आईसीसीले प्रतिबन्ध लगाएकाले उनीहरुको यो प्रतियोगितामा सहभागिता..
प्रतिभावान युवा क्रिकेटर पृथ्वी शासहित ३ भारतीय खेलाडी निलम्बनमा
काठमाडौं, १५ साउन । बीसीसीआईले भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शालाई ८ महिनाको निलम्बन गरेको छ। पृथ्वीसँगै अरु दुई खेलाडीलाई पनि बिसिसिआईले निलम्बित गरेको छ । कफ सिरपमा पाइने एक प्रतिबन्धित पदार्थ पृथ्वीले अन्जानमा सेवन गरेको बिसिसिआईको बयानमा उल्लेख गरिएको छ । उनले गएको फेब्रुअरी २२ मा इन्दौरमा सैयद मुश्ताक अली ट्रफीको एक खेलमा एन्टी डोपिङ्ग जाँचका लागि आफ्नो पिसाबको नमूना दिएका थिए । परीक्षणको क्रममा..
बार्सिलोना अझै नेयमारको पर्खाइमा
काठमाडौँ, १५ साउन । बार्सिलोना अझै ब्राजिलियन स्टार खेलाडी नेयमारलाई क्लबमा भित्र्याउन चाहेको डेली मेलले जनाएको छ । ला लिगा टोली बार्सिलोनाले नेयमारको लागि १ सय १० मिलियन पाउन्ड तिर्ने तयार छ । तर पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले भने १ सय ६५ मिलियन पाउन्डको माँग गरेको छ । जबकी शुरुमा फ्रेन्च क्लबले उनको लागि ३ सय मिलियन युरो (२७५ मिलियन पाउन्ड)..
मेराे जित्ने भाेक अझै मरेकाे छैन : क्रिष्टियानो रोनाल्डो
काठमाडौं, १४ साउन । युभेन्टसका स्टार तथा पाेर्चुगिज स्ट्रइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डोले जुनसुकै प्रतियोगितालाई जिताउने तागत आफूसँग भएको बताएका छन् । उनले अझै पनि आफूसँग पहिले जस्तै स्फू्ति र ताकत र जित्ने भाेक भएको बताएका हुन्। मंगलबार मार्का लिजेन्डको पुरस्कार पाए लगत्तै बोलेका रोनाल्डोले अझै पनि आफ्नो जीत्ने भोक नसकिएको बताए । पोर्चुगिज तथा इटालीयन जाइन्ट युभेन्ट्सका स्टार रोनाल्डो अघिल्लो सिजनमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडबाट युभेन्टस..
ग्लोबल टी–२० मा सोमपालको टिमले हरायो सन्दीप लामिछानेको टिमलाई
काठमाडौं, १४ साउन । ग्लोबल टी–२० क्रिकेट लिगमा नेपाली खेलाडी सोमपाल कामीको टोलीले सन्दीप लामिछानेको टिमलाई पराजित गरेको छ । सोमपालको टिम विनिपेग हक्सले सन्दीपको टोरन्टो नेशनल्सलाई ३ विकेटले पराजित गर्न गरेकाे हाे । क्यानाडामा जारी ग्लोबल टी–२० क्रिकेट लिगमा नेपाली खेलाडी सोमपाल कामी सन्दीप लामिछाने फरक टिममा खेलेका थिए । मंगलबार बिहान भएको खेलमा हक्स ३ विकेटले विजयी भएको हो । पहिले व्याटिङ गरेको..
रङ्गशालाका लागि एक सातामा डेढ करोड सङ्कलन
चितवन, १३ साउन रामपुरमा निर्माण गर्न लागिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि जिल्लामा सहयोग रकम सङ्कलन हुने क्रम बढेको छ । गत जेठ १५ गते स्थानीयवासीले बाटोको विवादलाई लिएर अस्थायी वार भत्काएपछि रोकिएको निर्माणको काम शुरु भएसँगै जिल्लामा रकम सङ्कलन हुन थालेको हो । यही साउन ८ गतेदेखि निर्माणको काम शुरु भएपछि जिल्लामा अहिलेसम्म रु एक करोड ४७ लाख ८८ हजार ५५५..
रोहित शर्मासँग मनमुटावको हल्ला बारे कोहलीले मुख खोले
काठमाडौँ, १३ साउन भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली र उप-कप्तान रोहित शर्मा बीच पछिल्लो समय मनमुटाव रहेको चर्चा भारतीय मिडियामा चलेको थियो। भारत विश्वकपको सेमिफाइनलमा न्युजिल्यान्डसँग पराजित भएर बाहिरिएपछी भारतका विभिन्न मिडियामा विराट कोहली र रोहित शर्माको सम्बन्धमा बाधा आएको बताएका थिए। भारतले वेस्ट इन्डिज भ्रमणमा जानुअघि सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे पहिलो पटक बोलेका हुन्। कोहलीले आफु र रोहित शर्माबीच कुनैपनि..
काठमाडौँ, १३ साउन अष्ट्रेलियामा सन् २०२० मा हुने आईसीसी टी २० एसिया विश्वकप छनोट क्षेत्रबाटै बाहिरिएपछि यति बेला नेपाली क्रिकेट टोलीको चर्को आलोचना भइरहेको छ । नेपाली क्रिकेटको भविष्यलाई लिए प्रश्न उठ्न थालेका छन् । तर यसबीचमा एक खबरले भने नेपाली क्रिकेटलाई केहि आशा दिएको छ । विश्व टि-२० वरियतामा ११ औं स्थानमा रहेको नेपाल प्रतियोगिताकै अब्बल मानिएको थियो । तर छनोटका..
४४ महिनापछि श्रीलंकाले जित्यो एकदिवसीय सिरिज, अन्तिम खेल बुधबार
काठमाडौं, १३ साउन । श्रीलंकाले बंगलादेशविरुद्ध घरेलु मैदानमा खेलिरहेको अन्तरराष्ट्रिय तीन एकदिवसीय सिरिज कब्जा गरेको छ । ४४ महिनाको लामो प्रतीक्षापछि श्रीलंकाले आफ्नै मैदानमा एकदिवसीय सिरिज जितेको हो । आइतबार बंगलादेशमाथि श्रीलंकाले ७ विकेटको जित दर्ता गर्यो । जितसँगै श्रीलंकाले तीन एकदिवसीय सिरिजमा २–० को अग्रता बनाउँदै जित निश्चित गरेको हो । अन्तिम एकदिवसीय खेल भने बुधबार हुनेछ । कोलम्बोस्थित प्रेमदास क्रिकेट मैदानमा बंगलादेशले दिएको..
विश्वकप झनै टाढा !
काठमाडौं, १३ साउन । पाँच राष्ट्र सम्मिलित विश्वकप क्वालिफायर एसिया फाइनलमा 'फेभरेटको ट्याग' लागेको नेपाल अन्तिम खेलमा सिंगापुरसँग ८२ रनले हारेपछि ग्लोबल क्वालिफायर पुग्नसमेत सकेन । विश्वकप झनै टाढा बन्यो । दोस्रो पटक टी २० विश्वकप खेल्ने लक्ष्य राखेपको नेपालको सपना एउटा हारले रोकिदिएको छ । सिंगापुर र कतारसँग पराजित भएको नेपालले मलेसिया र कुवेतलाई मात्र हराउन सक्यो । यसले युएईमा अक्टोबरमा हुने ग्लोबल..
Results 1917: You are at page 16 of 64